Kuveyt Menkul | Daahkaqaadıda Khatarta
Luqadda rasmiga ah ee shirkaddu waa Ingiriis. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxqabadka shirkadda, fadlan booqo qaybta Ingiriisiga ee goobta. Macluumaadka loo turjumay luqadaha aan Ingiriisiga ahayn waxaa loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad oo keliya mana lahan awood sharci, Shirkadda mas'uul kama aha saxnaanta macluumaadka lagu bixiyo luqado kale.
SOO bandhigida qatarta kumeelgaarka ah ajaanibta iyo gudbinta kahortaga
1. WAXQABADKA LOOGU SAMEEYAY SADDEXDA Shisheeye İ IYO JOOJINTA
1.1 Ganacsiga leveired, macnaheedu waa kordhinta macaashka ka imaan kara; Waxay sidoo kale ka dhigan tahay in khasaaruhu weynaaday. Hoos udhaca shuruudaha margin, waxay sare u qaadeysaa halista luminta haddii suuqa kaa kaa horkeeno. Mararka qaar xadadka loo baahan yahay wuxuu noqon karaa wax yar ilaa 0.5%. Xusuusnow in markaad wax iibsanaysid adoo isticmaalaya wax yar, khasaarahaaga ayaa ka badnaan kara lacag bixintaadii ugu horreysay waxaana suurtagal ah inaad lumiso lacag aad uga badan intii markii hore aad dhigatay. Qaddarka marinka bilowga ah wuxuu umuuqan karaa mid yar marka la barbardhigo qiimaha qandaraasyada sarifka lacagaha qalaad ama wax soo saarka maxaa yeelay saameynta 'leverage' ama 'gear' ayaa la isticmaalaa inta lagu jiro ganacsiga. Dhaqdhaqaaqyada suuq ahaan aan qiimo badnayn waxay ku yeelan doonaan saamayn sii kordheysa saamiga aad maalgashatay ama aad maalgashatay. Xaaladdaani waxay noqon kartaa adiga ama adiga. Intaad taageerayso booskaaga, waxaa jiri kara wax khasaaro ah heerka ugu hooseeya iyo qadarka lacagta ee lagu maalgeliyay Shirkadda. Haddii suuqa uu bilaabo inuu u dhaqaaqo dhinaca ka soo horjeedka jagadaada iyo / ama xaddiga farqiga udhaxeeya ee loo baahan yahay uu kordho, Shirkadda ayaa si deg deg ah ku weydiisan karta inaad dhigato qaddar dheeri ah si aad u taageerto booska. Ku guuldareysiga inaad buuxiso shuruudaha dhigaalka qaddarka dheeriga ah waxay sababi kartaa in jagooyinkaaga shirkaddaada la xiro, adiguna waxaad masuul ka noqon doontaa wixii khasaaro ama ah ee ka dhaafis ah ee la xiriira. 1.2 Amarada iyo Xeeladaha yareeya halista Xaddididda xaddiga amarrada qaarkood (tusaale ahaan & # 34; amarka joogsiga & # 34) ama khasaaraha ugu badan, haddii uu oggol yahay sharciga maxalliga ah, & # 34; joojinta-xadka & # 34; Dejinta amarradu waxay noqon kartaa mid aan fiicnayn marka laga hadlayo xaaladda suuqa taasoo ka dhigaysa amarrada noocaas ah kuwo aan suurtagal ahayn in la fuliyo (tusaale ahaan, marka laga hadlayo xisaabtanka suuqa). Istaraatijiyad kasta oo isticmaasha isku-dhafka goobaha, tusaale ahaan & # 34; taako & # 34; iyo & # 34; duullaan & # 34;, & # 34; dheer & # 34; iyo & # 34; gaagaaban & # 34; Waxaa laga yaabaa inaysan ka khatar badnayn sida caadiga ah ee goobaha.
2. HALIS KHATAR AH OO KHATAR AH OO KU SAABSAN LOOGU TALAGALAY KU-MEEL GAAR LOOGU TALAGALAY KU-MEEL GAAR LOOGU TALAGALAY KU-MEEL GAAR LOOGU TALAGALAY KU-MEEL GAAR AH
2.1 Xaaladaha gelitaanka qandaraasyada Waa inaad ka hesho macluumaad faahfaahsan dallaalkaaga shuruudaha gelitaanka qandaraasyada iyo waajibaadka la xiriira (tusaale ahaan, xaaladaha aad ku kasban karto waajibaadka inaad fuliso ama aad aqbasho hanti hoos timaad gaarsiinta shuruudaha), qandaraasyada mustaqbalka ama, haddii ay dhacdo ikhtiyaar, taariikhaha ay dhacayaan iyo macluumaadka ku saabsan waqtiga xadidan ee fulinta xulashooyinka). Xaaladaha qaar awgood, sarrifka ama guriga nadiifinta ayaa wax ka beddeli kara shuruudaha qandaraasyada aan la go'aansan (oo ay ku jiraan khidmadda shaqo joojinta) si ay u muujiso isbeddelada suuqa ee hantida.
2.2 Joojinta ama xaddidaadda ganacsiga. Xiriirka sicirka
Xaaladaha suuqa qaarkood (tusaale ahaan xisaabtanka) iyo / ama qawaaniinta hawlgalka ee suuqyada qaar (tusaale hakinta ganacsiga qandaraasyada, bilaha, sababo laxiriira xuduudaha isbeddelada qiimaha) waxay kordhin karaan halista. khasaaraha soo gaadhay maxaa yeelay fulinta macaamil ganacsi ama boosaska wax lagu kala iibsado / shabaqa ayaa noqda mid adag ama aan macquul ahayn. Haddii aad iibiso xulashooyinka, khasaaruhu wuu kordhi karaa. Iskuxirnaan salka ku haysa marwalba kama dhexeyso qiimaha hantida iyo hantida ka dhalanaysa. Maqnaanshaha sicirka tixraaca ee hantida caddaaladda & # 34; way adkaan kartaa in la sii saadaaliyo.
2.3 Lacag iyo hanti la soo xareeyay
Markaad hawlgal ka wado dalkaaga ama dibedda, gaar ahaan haddii aad dooneysid inaad kacdo ama aad u kacdo shirkaddu markay macaamil samaynayso, iyadoo la raacayo xadka amniga ee aad dhigato lacag caddaan ah ama hanti kale Waa inaad wax ka ogaataa. mawduuca Xaddiga aad ku soo celin karto lacagtaada ama hantidaada kale waxaa nidaaminaya sharciga iyo heerarka wadanka ee ay bixiso Counterparty.
2.4 Khidmadaha komishanka iyo kharashaadka kale
Kahor intaadan ku biirin wax ganacsi ah, dhammaan khidmadaha komishanka, waa inaad haysaa macluumaad cad oo ku saabsan lacagaha iyo kharashyada kale ee aad bixin karto. Kharashaadkani waxay saamayn ku yeelan doonaan natiijada maaliyadeed ee saafiga ah (faa iidada ama khasaaraha).
2.5 Macaamil ganacsi oo ka socda xukunno kale
Sameynta macaamil ganacsi ee suuqyada deegaannada kale, oo ay ku jiraan suuqyada sida rasmiga ah ugu xiran suuqaaga gudaha, ayaa kugu soo kordhay. Waxay sababi kartaa khataro. Qawaaniinta suuqyada la soo sheegay way ka duwanaan karaan kaaga marka loo eego heerka ilaalinta maal-gashadayaasha (oo ay ku jiraan heer ka hooseeya ilaalinta kanaga). Hay'addaada sharci-dejinta ee maxalliga ahi ma hubin karto in sharciyada ay dejiyaan hay'adaha sharci-dejintu ama suuqyada ku yaal meelaha kale ee ganacsiga ee aad ku ganacsanayso ay yihiin kuwo khasab ah. Markii khasaaruhu ka soo baxo lacagta qandaraaska una beddelo lacagta koontada, waxaa saamayn ku leh isbeddelka sicirka sarrifka.
2.7 Khatarta Liisanka
Khatarta lacagta ayaa saamaynaysa awooddaada ganacsi. Khatarta ah in CFD-gaaga ama hantidaada aan laga ganacsan doonin (ka hortagga khasaaraha ama macaash sameynta) waqtiga aad rabto inaad ka ganacsato. Intaas waxaa sii dheer, xadiga ay tahay inaad dhigato bixiyaha CFD ayaa dib loo xisaabinayaa maalin kasta iyadoo lagu saleynayo isbeddelada qiimaha hantida hoose ee CFD-yada aad adigu leedahay. Haddii dib u qiimeyntan (dib u qiimeynta) ay sababto hoos u dhac ku yimaada qiimaheeda marka loo eego qiimihii maalintii hore, waa inaad isla markiiba lacag kaash ah siisaa alaab-qeybiyaha CFD si aad dib ugu hagaajiso xarigga oo aad u xirto qasaaraha. Haddii aadan awoodin inaad bixiso, bixiyaha CFD ayaa laga yaabaa inuu xiro booskaaga haddii aad kaqaybqaadato ficilkan iyo inkale. Kadib, xitaa haddii qiimaha hantida asalka ah dib loo helo, waa inaad dabooshaa khasaaraha. Haddii aadan haysan marinka loo baahan yahay, waxaa jira bixiyeyaasha CFD oo dareeraya dhammaan jagooyinkaaga CFD xitaa haddii mid ka mid ah jagooyinkaani ay muujinayaan faa'iido adiga heerkaas ah. Si booskaagu u furnaado, waxaad u baahan kartaa inaad u oggolaato bixiyaha CFD inuu lacag dheeraad ah ka qaado (badanaa kaarkaaga deynta ah) ikhtiyaar ahaan markii loo baahdo wicitaannada ku habboon ee wicitaanada. Suuqa xawaaraha ku socda, ee isbadalka badan, qaabkan waxaad si fudud ugu maamuli kartaa biilka kaarka deynta badan.
2.8 & # 34; Jooji khasaaraha & # 34; xadadka
Si loo xaddido khasaaraha, bixiyeyaal badan oo CFD ah ayaa ku siinaya fursad aad ku doorato xadka joojinta luminta". Tani waxay si otomaatig ah u xireysaa goobtaada markay gaarto xadka qiimaha aad dooratay. Tusaale ahaan